တျောပါတော့ ဆရာ – My Blog
သမီး အမညျက ( လုံးလုံး ) နာမညျနဲ့ လိုကျအောငျ ခန်ဓာကိုယျက လုံးပွီး ငရံ ကိုယျလုံး အရပျက ၅ပေ၎လကျမ အမြားမွငျမှ အပြိူလို့ ထငျရပမေဲ့ ယောကျကြားနဲ့ ရှိတယျ ဆန်ဒတောငျး တ နသေမြှ လုံးယောကျကျြားက လကျဖြာခါခဲ့တဲ့ လုံးရဲ့ ရမ်မကျဇော တှကေ မထိမျးနိုငျ မတားနိုငျသလိုပေါ့ လုံးတို့ မှာ ကလေး ၃လ သားရှိတယျ လုပျငနျးက ရလေုပျငနျး ငါးဖမျး စကျလှနေဲ့ ထှကျရတယျ အငျးမှာ နရော တနရော ပေးပွီး နခှေငျ့ပေးထားတယျတနေ့ အငျးသူ အငျသားမြားကကဲ ”
” အားလုံးနားထောငျကွပါ ဒီနေ့ မွို့က လုပျငနျး ပိုငျရှငျ အငျးသူဌေး ဒီနလေ့ာမယျ ဒါကွောငျ့ ဟငျးခကျြ ကောငျးကောငျး တဈယောကျလောကျ ဟငျးခကျြဝိုငျးမှာ ကူရမယျ ဒီအငျးမှာ ဟငျးခကျြကောငျးတာ ဘယျသူရှိလညျး “””” ဟေ့ ::: ခနလောကျနတေော့ လုံးယောကျကြားက ထပွောတယျ ကိုကွီး ကနြျောမိနျးမ ဟငျးခကျြကောငျးတယျ ဗအြားလုံးကလညျး ” ဟုတျတယျ လုံးလုံး ဟငျးခကျြတျောတယျ သူက လကျရာလဲ ကောငျး သပျသပျရပျရပျ လညျးရှိတယျ သူ့ ကိုတာဝနျပေးလိုကျပါ ကိုကွီးအမြားလဲ လုံးလုံးကို ပွောနတေော့ လုံးလဲ မနနေိုငျတော့ လုံးခကျြကြှေးပါတယျ
ဒါနဲ့ ဘယျနှဈယောကျလဲ အေးကှယျ ” ကလေးမ ခကျြကြှေးမယျဆိုတော့ ကောငျးတာပေါ့ မွို့က လာမှာက သုံးယောကျကှဲ့ သူဌေးတို့ လငျမယား ရယျ ကားမောငျးသူရယျ ဒါဘဲပေါ့ ဟုတျခဲ့ ဒါဆို လုံး ဈေးသှားတော့မယျ ဝယျစရာရှိတာ ဝယျရအောငျလို့ ပိုကျဆံ တောငျးပွီး ထှကျလာခဲ့တယျ ဈေးက ပွနျလာတော့ အငျးထဲ လူရူပျနတေယျကားကောငျးစား တဈစီးကလဲ ရှိနတေော့ဒါဆို သခြောပွီး သူဌေး ရောကျနပွေီး ဆိုပွီး သွျော ” ပွောရငျ ဆိုရငျ မီလုံး ရောကျလာပွီး ဟေ့ ကလေးမ အမွနျခကျြဟေ့ ဒီမှာ သူဌေး ရောကျနပွေီး ခနနေ ထမငျးစားတော့မှာ အမှိတော့ ခကျြကလေးမရေး ဟုတျခဲ့ ဦးကွီး ဆိုပွီး မိနျးမ သုံးယောကျ ကူလုပျရနျ ချေါလာပွီး ထမငျး တဲထဲ ခကျြတော့တာပေါ့ သူဌေးရော သူဌေး ကတျောရော ကွညျ့ကောငျးတာဘဲ အရှယျက ၃၈ ၄၀ လောကျရှိပုံဘဲ ထမငျးစား ရကျခကျပေး ပွီး ဦးကွီးနဲ့ စကားတှပွေောနကွေတယျ
ညနေ ၃နာရီ လောကျရောကျတော့ သူဌေး ကတျောက ပွနျမယျဆိုလို့ အကုနျလုံး အပွငျထှကျ နူတျဆကျတယျသူဌေးကတော့ ညရောကျတော့ သူဌေး နားတဲ့ တဲမှာ တီဗီ ကွညျ့ အငျးသားမြားနဲ့ ကွညျ့ကွတာပေါ့ ရီကွ မောကွပေါ့ စကားပွောကွနဲ့ နေ့ အလုပျလုပျ ည အခြိနျကုနျ တီဗီ ကွညျ့ ဒါနဲ့ အခြိနျတှေ ကုနျလာတယျ ၄ရကျလောကျ ရောကျတော့ သတိထားမိပုံ လေးပေါ့ မီလုံး ရခြေိူးနတေဲ့ အခြိနျ ညနေ ဆို သူဌေး တဲ တဲ့ တဲ ဘကျကို မကျြနှာ ရောကျမိတယျအမျ “” သူဌေးက ငါ ရခြေိူးနတောကို မှနျဘလူးနဲ့ ကွညျ့နတောပါလား အငျး ဒါ ခုမှ ကွညျ့တာ မဖွဈနိုငျလောကျဘူး ငါ့ကွညျ့တာ မဟုတျပါဘူးလေ နောကျနလေဲ့ ဒီလိုဘဲ ရခြေိူးနတေဲ့ အခြိနျ သူဌေးက တဲ ရှကေ့နေ မှနျဘလူး နဲ့ ကွညျ့နတေတျတယျ အငျး မဖွဈသေးပါဘူး မီလုံးတို့ကလဲ ဒါမြိူးဆို စိတျဝငျးစားမိတယျ ဒါနဲ့ဘဲ သူဌေး မွငျသာအောငျ မသိသလိုနဲ့ ခြောငျထဲ ထမိနျးလေး အသာလေး လြော့ပွီး နို့တှကေို ပှတျတိုကျနလေိုကျတယျသူဌေး မွငျသာအောငျပေါ့ တခါတလေ သူဌေး ကိုထမငျးခကျြပေးရငျ သူဌေး မွငျသာအောငျ ကလေးကို နို့လှနျ တိုကျပေးတယျ
သူဌေးကို မမွငျရပမေဲ့ သူဌေး ကွညျ့နတေယျဆိုတာ သိနပွေီးသားပါ တဈရကျ သူဌေး ကို ထမငျးခူးကြှေးရငျ သူဌေး ရှကေ့နေ ကလေး နို့တိုကျပွတယျ အောကျထဲ ကလေး ဆော့စရာ ပွဈခပြွီး သူဌေး ပုဆိုးကို ကွညျ့တော့ ဖောငျးနတော မွငျနရေတယျအငျး”” သူဌေးလဲ မိနျးမ နဲ့ ကှဲနတော ကွာပွီးလေ မီလုံး ဘာလုပျရမလဲ တှေးနတောပေါ့ တှေးနတေုနျးမှာ မီလုံး အနားရောကျလာပွီး မီလုံး နငျက ယောကျြား နှဈယောကျရထားတာဆို ဟုတျတယျ ” သူဌေး အျော ” ပထမ တဈယောကျက ဘာလို့လဲ အငျး “ပွောဆို အခဈြဦးပေါ့ အလုပျကတော့ မယျမယျရရ အလုပျမလုပျဘူး စိတျကုနျပမေဲ့ အကှာ ရကျနိုငျဘူးလေ အျော” ဒီ တဈယောကျ ကွတော့ရော အငျး ” ကိုအောငျကြျောက ရိုးသားတယျ
အလုပျလုပျတယျမီလုံး တဈခုလတျ ဖွဈနတောတောငျ မီလုံးပျေါ အလိုကျသိတယျ လေ တခါတလေ မီလုံးကတောငျ အားနာနရေတာဟုတျပါပွီး ” မီလုံးလဲ ဖှငျ့ဖှငျ့လငျးလငျး စကားလာပွောပါ ရငျးရငျးနှီးနှီး ရှိတာပေါ့ ဟုတျခဲ့ သူဌေး ဟာ သူဌေးလို့ မချေါပါနဲ့ အကိုကွီးဆို တျောပွီးပေါ့ မလုပျပါနဲ့ သူဌေးရယျ ဘေးလူ မွငျရငျ မကောငျးဘူး ဒါဆိုလဲ ဆရာလို့ဘဲ ချေါပါ ဟုတျခဲ့ ဆရာ “” ဆိုပွီး လှညျ့ထှကျသှားတယျနောကျနေ့ မနကျရောကျတော့ ထမငျးခကျြနရောလာပွီး မီလုံးကို စကားပွောတယျ မီလုံးလဲ ကလေးနို့ဘဲ တိုကျတာ ကွာတော့ “” ဟဲ့ မီလုံး ကလေးလဲ ငါနဲ့ တှမှေ့ နို့ဘဲ ဆာနတောလား အငျး “” ဟုတျမှာပေါ့ ကလေး လဲ ဆာသလို ဆရာလဲ ဘာလဲ နို့ဆာ နလေို့လား စ နောကျ စကားသှယျလိုကျတယျနငျက တကယျ နို့တိုကျမှာလား ငါလဲနို့ဆာ နတော ကွာပွီးဟ အမှနျတိုငျးပွောရရငျ ဆရာလညျး မီလုံး ရခြေိူးနတော ကွညျ့ကွညျ့နရေတာဆရာ မီလုံးကို တဈကွိမျ တခါလောကျ လုပျခှငျ့ ရရငျ သိမျ့ကောငျးမှာဘဲလို့ တှေးနမေိတယျ
မီလုံးကတော့ ဆရာကို တခါလောကျ လုပျခှငျ့ပေးမလား ဟို အတူနတောတော့ ဟုတျပါဘီ အငျးထဲက လူက မပွကျဘူး ပွီးတော့ ယောကျြား သား တှနေဲ့ဆိုတော့ ဖွဈမယျ မထငျပါဘူး ဟယျ့တှကျနဲ့ ဘာမှ မပူနဲ့ ဆရာ မနကျဖွနျ မီလုံး တဲဘကျ လာခဲ့မယျ ဘယျသူမှ မရှိစရေဘူး အပြျော တှနေဲ့ ထှကျသှားတဲ့ ဆရာ ကြောကွညျ့ပွီး မီလုံးလဲ သနားမိတယျနောကျနေ့ မနကျရောကျတော့ အငျးသားတှကေို ဆရာက အကုနျချေါတယျ ပွီးတော့ အနောကျဘကျ ဝေးတဲ့ အငျးတဈအငျးဘကျ သှားခိုငျးပွီး ဆယျတှေ ယူခိုငျးတယျ ယောကျြားအကုနျနီးနီး လိုကျသှားဆိုဘဲ ၉နာရီလောကျ မီလုံးလဲ ရခြေိူးထားလိုကျတယျ ပွီးတော့ ဆရာက မှနျဘလူး နဲ့ ကွညျ့နတေယျရခြေိူးပွီး တဲထဲ သနကျခါးလိမျနလေိုကျတယျအကြီင်္ ဝတျမယျ ရှိသေး ဝတျမနပေါနဲ့ မီလုံးရယျ ဘယျသူမှ မရှိတော့ပါဘူး ဟငျ””ဆရာက မွနျတာ ရောကျလာတာ ဟဲဟဲ မမွနျဘဲ ရမလား ညနဆေို အကုနျပွနျလာတော့မှာ မလာခငျ အ ဝ စားခငျြလို့ပေါ့ ဟှနျး သိပါတယျ
ဒါကွောငျ့ လူရှိသမြှ အကုနျ ထညျ့လိုကျတာ ဆရာ မီလုံးနား ရောကျလာပွီး လိမျးထားတဲ့ သနကျခါး ပါးပွငျကို စ နမျးတယျ ပွီးတော့ ကုတငျပျေါ လဲပွီး ထမိနျးလေးကို အသာလေး ခြှတျပွီး မီလုံး စပ )လေးကို ပှတျပေးနတေယျ ခနလောကျနတေော့ ဆရာ လဲ ပုဆိုးခြှတျတယျ ဟငျ ” ဆရာဟာက အကွီးကွီးဘဲ မီလုံး ခံနိုငျပမလား အဲ့မယျ ယောကျြား နှဈယောကျ လီးတှပွေီ့းခုဟာက ကွီးတယျဆိုတော့ ဟုတျတယျလေ နှဈယောကျလုံးက ဆရာ ဟာလောကျအကွီးဘူး သခြောတယျနပေါဦး ပထမ တဈယောကျတုနျးက အလုပျဇှဲ မရှိပမေဲ့ လုပျတာ အရမျးကောငျးလို့ မကှာနိုငျတာ မို့လား ဆရာက သိနတောဘဲ ဟုတျတယျ အလုပျဇှဲ မရှိပမေဲ့ မီလုးံ လုပျတာပေါ့ နညျးပေါငျးစုံဘဲ ဒါကွောငျ့လညျးမီလုံးက ၃လ ၄လ လောကျ မကှာနိုငျဖွဈတာပေါ့ဟုတျပါပွီး ခု ဆရာနဲ့ တှေ့ ရငျ မီလုံးသဘောကွသှားမယျ ပွောပွောဆိုဆို မီလုံး နို့တှကေို ကိုငျပေးနတေယျ ပွီးတော့ ပိပိ လေးကို လကျကလေးနဲု့ ကလိပေးနတော နောကျဆုံး ပိပိ လေးကို ဆရာ လီးကွီးက လာပွီး ကလိပေးနတေယျ
မီလုံးလဲ ကွာလာလေ မနနေိုငျဘူးအရမျး ရမ်မကျ စိတျတှကေ ထ လာတယျဆရာရယျ ထညျ့မှာဖွဈ ထညျ့ပါတော့ မီလုံး မနနေိုငျတော့ဘူး အရမျး ယားပွီး ဘလို ပွောရမလဲ မသိတော့ဘူးပွောပွောဆိုဆို ဆရာ စ ထညျ့တယျလာတယျအာ” အား “””””” ကြှတျ ” ကြှတျ နာတယျ ဆရာ ဆရာဟာက အတျောကွီးတာဘဲ အငျးလေ ကွီးမှာပေါ့ ဆေးထိုးထားတာလေ မွို့မှာ လီကွီးမှ မိနျးမတှကေ ကွိုကျကွတာ မလေးးမီလုံး လဲ ကွိုကျပါတယျ မွို့ထငျမဟုတျပါဘူး မိနျးမတိုငျး လီးကွီးတာ ကွိုကျကွတာပါ ဆရာ ဖွေးဖွေး “” အား “””အာ အရမျး ကောငျးလားပွီး ဆရာ အငျး ဆရာလဲ မိနျးမ နဲ့ ဝေးနတော ၅ရကျရှိပွီး မီလုံးကိုဘဲ ကြေးဇူး တငျရတော့မယျ လုပျပွီး မီလုံးရေး ဆရာလဲ မနနေိုငျတော့ဘူး ဘှတျ”ဘှတျ” အား ” အာ ကောငျးတယျဆရာ ဒီထကျ မွနျလေ ကောငျးလေ ဘဲ အရမျးထိတယျအား”” ဘှတျ အား””””” ကောငျး ” ကောငျးတယျ ” ဆရာ မွနျမွနျ”” လေ “လုပျပေးပါ ” အား ” အာ “” ပွီးပွီး” ပွီး တညေ့မယျ ” အား ” အာ “အား ” အာ””” ဆရာလဲ အမွနျလုပျပွီး ပွီးသှားတယျ မီလုံးလဲ ပွီးသှားတယျ ခနလောကျ နားပွီး ဆရာ မီလုံး ထမငျခကျြလိုကျဦးမယျ ဆရာ ခန ဒီမှာ မှေးနလေေ ဆိုပွီး ဆရာ တဲဘကျ ထမငျးခကျြ ထှကျသှားခဲ့တယျ တအောငျလောကျ ကွာတော့ ဆရာက ပျေါမလာဘူး ဒါနဲ့ လိုကျချေါ ကွညျ့တော့ အိပျနတေယျ ဆရာ ” ဆရာ ထတော့လေ ဆရာ ဆရာ ထလာပွီး မီလုံးမွငျတော့ ကုတငျပျေါ ဆှဲလှဲလိုကျတယျ ပွီးတော့ ထမိနျးကို ဆှဲခြှတျပွီး ကုတငျပျေါ လေးဘကျ ထောကျခိုငျးတယျ ပွီးတော့ နောကျကနေ စ ထညျ့တော့တယျ
ဆရာကွညျ့ရတာ အတျော ငတျနပေုံဘဲ မီလုံးကို နောကျက မီးကုနျရမျးကုနျ ဆျောနတေော့တယျခနလောကျကွာတော့ အား ဆိုပွီး ပွီးသှားပုံဘဲ ဆရာ ထမငျးခူးထားလိုကျမယျ ခနနေ ဆရာ တဲဘကျ လာခဲ့တော့ ဆိုပွီး ထှကျသှားတယျ ဆရာ ရောကျလာတော့ ထမငျးခူး ထားလိုကျတယျ ဆရာလဲ မထငျးစားပွီး မီလုံး တခါထဲ ဝငျစားပါလား တျောပါပွီး ဆရာ ဆရာစားပွီးမှဘဲ စားပါတော့မယျ အေးအေး သဘောပါဘဲ ဆရာစားပွီးတော့ မီးလုံးလဲ ထမငျးစားတော့တယျစားပွီးလို့ စကားပွောကွတာပေါ့ဆရာက ဘယျတော့ ပွနျမလဲ ဟငျ”အငျး ဒီကို တဈပတျဘဲ အခြိနျရမှာလမွေို့မှာလဲ အလုပျရှိသေးတယျ တဈဘကျခါ ဆိုပွနျမှာ အျော မပူပါနဲ့ နောကျလ တှေ ဆရာ လာရငျ ဒီလိုဘဲ ကြှေးပါ မီလုံး စပ အရမျးလုပျကောငျးတျာ အို ” ဆရာကလဲကွာပါတယျ ခနနေ ဟိုကောငျတှေ လာတော့မှာ မီလုံး တခြီလောကျ ဆှဲရအောငျ ဒါဆို ဆရာ ခန လှဲနလေိုကျ မီလုံး ပွုစု ပေးမယျ ဆရာလဲ ကုတငျပျေါ လှဲနလေိုကျတယျမီလုံးလဲ ဆရာ ပုဆိုး ကို အသာလေး မ လိုကျတယျ
အမျ ” ဆရာဟာကလဲ လှနျးလှနျးတယျ မာ မာနိုငျတယျ မာမှာပေါ့ မီလုံးရယျ ၅ရကျလောကျက ငတျနတေော့ ပွီးတော့ မီလုံးကို လိုးခှငျ့ ရခငျြနတေော့ ထ လာတာပေါ့ မီလုံးလဲ ဆရာ လီးကို အသာ လေး ငုံလိုကျတယျ ပွီးတော့ လြှာဖြာ လေးနဲ့ လီးထိပျကလေးကို ကလိပွီး ရကျပေးနတေယျ ပွီး ရခေဲခြောငျး စုတျသလို စုတျပေးပွီး အာခေါငျထိ ငုံပေးလိုကျတယျ ဆရာ အသံတှေ တအာ” အား နဲ့ ထှကျလာတယျ ကောငျးလှကွီးလား မီလုံးရယျ အိမျက မိနျးမ ဘယျနား ထားရမလဲ မသိတော့ပါဘူး မီလုံး လဲ ဆရာကို သနားလို့ပါ သူမြား ရခြေိူးနတောကိုခြောငျးခြောငျးကွညျ့နတော မသိရငျ ခကျမယျ အငျးပါကှယျ ဆရာလဲ မီလုံးကို ကြေးဇူး တငျပါတယျ မူတျပေးပွီး မကွာပါ ဆရာ ထ လာပွီး မီလုံးကို လုပျတော့တာဘဲ ဒီတခါ အရငျ တခါလောကျ မမွနျဘဲ ကွာကွာလေး လုပျပေးသှားပွီး ပွီးသှားတယျ
ညနေ ရောကျတော့ ယောကျြား နဲ့ အငျးသားမြား ပွနျရောကျလာပွီး ညကွ ယောကျြားက တတျလိုးပွနျတယျ ည ဆရာတဲဘကျ တီဗီ မကွညျ့နိုငျဘဲ မောပနျးနဲ့ အိပျပြျောသှားတယျ မနကျ ထမငျးခကျြသှားတော့ ဆရာက မီလုံး ညက ဘာလို့ မလာတာလဲအငျး မီလုံးလဲ ပငျပနျလို့ အိပျပြျောသှားတယျ လေ အျော ဘာလဲ ယောကျြားက တတျလိုးလို့ မောသှားတာလား ဟိ အငျးပေါ့ နေ့ ခံ ည ခံ ဘယျခံနိုငျပါ့မလဲ အငျးပါလေ ဒီညတော့ တံဘကျ တီဗီ လာကွညျ့ဦး ဆရာက မနကျဆို ပွနျမှာ ဟုတျခဲ့ လာမှာပါ ပွောပွီး ဆရာလဲ ထှကျသှားတယျ နလေ့ညျ လောကျရောကျတော့ တဲဘကျပွနျပွီး တရေးတမော အိပျနလေိုကျတယျ အသံကွားလို့ ကွညျ့လိုကျတော့ဟငျ ” ဆရာ ဘာလာလုပျတာလဲရူးတိုးတိုး မငျးယောကျြား ခု ခိုငျးလိုကျလို့ဆိုငျကယျနဲ့ အပွငျသှားတယျ
ငါမနနေိငျလို့ အျော ဆရာရယျ မွနျမွနျလေးတော့ လုပျပါနျော ကလေးလဲ နိုးနအေုနျးမယျအေးပါ မီလုံးရယျ ဟငျ နငျဟာက အရညျတှေ ထှကျနတောပါလား မဟုတျဘူး ဆရာရဲ့ ကိုအောငျကြျော ခုလေးတငျ တတျလုပျသှားတာ မီလုံး ရဆေေးဦးမယျ ခန နနေေ အခြိနျ မရဘူး သူမြား လုပျပွီးသား ထပျ လိုးရမှာ ဒါ ငါ့ဘဝ ရဲ့ ပထမ ဦးဆုံးဘဲ ဆိုပွီး ခြှဲနတေဲ့ စကျပကျ ထဲကို လီးထညျ့ပွီး ဘှတျ ” ဖှတျ ” အှနျ့ ” အားပါးပါး ကောငျးတယျ ဟ စီးဖနျနတောဘဲ အရမျး အရသာ သမြိူးပေါ့ မွနျမွနျ လုပျပါ ဆရာ ဆရာလဲ အခြိနျမရမှနျး သိတော့ မွနျမွနျလေး ပွီးသှားတယျ ညရောကျတော့ ဆရာ ပွောသလိုဘဲ ကလေးကောကျခြီပွီး တီဗီ လာကွညျ့တယျ တီဗီ တာကွညျ့နရေတာ ဒီနကေ့ ဘောလုံးပှဲကွီး လာနတေော့ ကွညျ့ရတာ ပွငျးမိတယျ
ဒါနဲ့ ဆရာ ကွညျ့တော့ မကျြစ ပွဈပွတယျအပွငျ ထှကျခဲ့ သဘော ပေါ့ ဒါနဲ့ ယောကျြား နခေဲ့ မလား မီလုံး ပွနျတော့မယျ အေးအေး မိနျးမပွနျနှငျ့တော့ ဘောပှဲပွီးမှပွနျလာတော့မယျ အငျး ဒါဆို သှားပွီးနျော ဆိုပွီး ကလေးခြီ ထှကျခဲ့တယျ လမျး ဝါးရုံနား ရောကျတော့ ဆရာ လိုကျလာမလား ဆိုပွီး စောငျ့နလေိုကျတယျခနနတေော့ ဖနပျသံ ကွားရပွီး ဆရာ ရောကျလာတယျ နငျစောငျ့ပါ့မလား တှေးပူနတော ငါလဲ ဒီကောငျတှေ ဘောပှဲ ကောငျးနတေုနျး အိပျသာဆိုပွီး ထှကျလာတာ ဟို နငျကလေး ခန ခထြားလိုကျပါဟာမီလုံးလဲ ကလေးကို အောကျ ခန ခပြွီး ကွာတယျ ဒီတိုငျး လုပျတော့မယျဟိုဘကျလှညျ့ ဝါးရုံပငျ ကိုငျပွီး ဖငျကုနျပေး ငါနောကျက လိုးမယျဆိုပွီး မီလုံး နောကျကနေ မွနျမွနျ သှကျသှကျေီလုးနတေယျ တအောငျ့နတေော့ ဆရာလဲ ပွီးသှားတယျ နောကျလ တှေ ဆရာ လာရငျ လာသလို ခိုးစားခဲ့တယျဒီနေ့ ဒီခြိနျထိ ဆိုပါတေ…. ပွီး
သမီး အမည်က ( လုံးလုံး ) နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က လုံးပြီး ငရံ ကိုယ်လုံး အရပ်က ၅ပေ၄လက်မ အများမြင်မှ အပျိူလို့ ထင်ရပေမဲ့ ယောက်ကျားနဲ့ ရှိတယ် ဆန္ဒတောင်း တ နေသမျှ လုံးယောက်ကျာ်းက လက်ဖျာခါခဲ့တဲ့ လုံးရဲ့ ရမ္မက်ဇော တွေက မထိမ်းနိုင် မတားနိုင်သလိုပေါ့ လုံးတို့ မှာ ကလေး ၃လ သားရှိတယ် လုပ်ငန်းက ရေလုပ်ငန်း ငါးဖမ်း စက်လှေနဲ့ ထွက်ရတယ် အင်းမှာ နေရာ တနေရာ ပေးပြီး နေခွင့်ပေးထားတယ်တနေ့ အင်းသူ အင်သားများကကဲ ”
” အားလုံးနားထောင်ကြပါ ဒီနေ့ မြို့က လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် အင်းသူဌေး ဒီနေ့လာမယ် ဒါကြောင့် ဟင်းချက် ကောင်းကောင်း တစ်ယောက်လောက် ဟင်းချက်ဝိုင်းမှာ ကူရမယ် ဒီအင်းမှာ ဟင်းချက်ကောင်းတာ ဘယ်သူရှိလည်း “””” ဟေ့ ::: ခနလောက်နေတော့ လုံးယောက်ကျားက ထပြောတယ် ကိုကြီး ကျနော်မိန်းမ ဟင်းချက်ကောင်းတယ် ဗျအားလုံးကလည်း ” ဟုတ်တယ် လုံးလုံး ဟင်းချက်တော်တယ် သူက လက်ရာလဲ ကောင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် လည်းရှိတယ် သူ့ ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါ ကိုကြီးအများလဲ လုံးလုံးကို ပြောနေတော့ လုံးလဲ မနေနိုင်တော့ လုံးချက်ကျွေးပါတယ်
ဒါနဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ အေးကွယ် ” ကလေးမ ချက်ကျွေးမယ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ မြို့က လာမှာက သုံးယောက်ကွဲ့ သူဌေးတို့ လင်မယား ရယ် ကားမောင်းသူရယ် ဒါဘဲပေါ့ ဟုတ်ခဲ့ ဒါဆို လုံး ဈေးသွားတော့မယ် ဝယ်စရာရှိတာ ဝယ်ရအောင်လို့ ပိုက်ဆံ တောင်းပြီး ထွက်လာခဲ့တယ် ဈေးက ပြန်လာတော့ အင်းထဲ လူရူပ်နေတယ်ကားကောင်းစား တစ်စီးကလဲ ရှိနေတော့ဒါဆို သေချာပြီး သူဌေး ရောက်နေပြီး ဆိုပြီး သြော် ” ပြောရင် ဆိုရင် မီလုံး ရောက်လာပြီး ဟေ့ ကလေးမ အမြန်ချက်ဟေ့ ဒီမှာ သူဌေး ရောက်နေပြီး ခနနေ ထမင်းစားတော့မှာ အမှိတော့ ချက်ကလေးမရေး ဟုတ်ခဲ့ ဦးကြီး ဆိုပြီး မိန်းမ သုံးယောက် ကူလုပ်ရန် ခေါ်လာပြီး ထမင်း တဲထဲ ချက်တော့တာပေါ့ သူဌေးရော သူဌေး ကတော်ရော ကြည့်ကောင်းတာဘဲ အရွယ်က ၃၈ ၄၀ လောက်ရှိပုံဘဲ ထမင်းစား ရက်ခက်ပေး ပြီး ဦးကြီးနဲ့ စကားတွေပြောနေကြတယ်
ညနေ ၃နာရီ လောက်ရောက်တော့ သူဌေး ကတော်က ပြန်မယ်ဆိုလို့ အကုန်လုံး အပြင်ထွက် နူတ်ဆက်တယ်သူဌေးကတော့ ညရောက်တော့ သူဌေး နားတဲ့ တဲမှာ တီဗီ ကြည့် အင်းသားများနဲ့ ကြည့်ကြတာပေါ့ ရီကြ မောကြပေါ့ စကားပြောကြနဲ့ နေ့ အလုပ်လုပ် ည အချိန်ကုန် တီဗီ ကြည့် ဒါနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လာတယ် ၄ရက်လောက် ရောက်တော့ သတိထားမိပုံ လေးပေါ့ မီလုံး ရေချိူးနေတဲ့ အချိန် ညနေ ဆို သူဌေး တဲ တဲ့ တဲ ဘက်ကို မျက်နှာ ရောက်မိတယ်အမ် “” သူဌေးက ငါ ရေချိူးနေတာကို မှန်ဘလူးနဲ့ ကြည့်နေတာပါလား အင်း ဒါ ခုမှ ကြည့်တာ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး ငါ့ကြည့်တာ မဟုတ်ပါဘူးလေ နောက်နေ့လဲ ဒီလိုဘဲ ရေချိူးနေတဲ့ အချိန် သူဌေးက တဲ ရှေ့ကနေ မှန်ဘလူး နဲ့ ကြည့်နေတတ်တယ် အင်း မဖြစ်သေးပါဘူး မီလုံးတို့ကလဲ ဒါမျိူးဆို စိတ်ဝင်းစားမိတယ် ဒါနဲ့ဘဲ သူဌေး မြင်သာအောင် မသိသလိုနဲ့ ချောင်ထဲ ထမိန်းလေး အသာလေး လျော့ပြီး နို့တွေကို ပွတ်တိုက်နေလိုက်တယ်သူဌေး မြင်သာအောင်ပေါ့ တခါတလေ သူဌေး ကိုထမင်းချက်ပေးရင် သူဌေး မြင်သာအောင် ကလေးကို နို့လှန် တိုက်ပေးတယ်
သူဌေးကို မမြင်ရပေမဲ့ သူဌေး ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သိနေပြီးသားပါ တစ်ရက် သူဌေး ကို ထမင်းခူးကျွေးရင် သူဌေး ရှေ့ကနေ ကလေး နို့တိုက်ပြတယ် အောက်ထဲ ကလေး ဆော့စရာ ပြစ်ချပြီး သူဌေး ပုဆိုးကို ကြည့်တော့ ဖောင်းနေတာ မြင်နေရတယ်အင်း”” သူဌေးလဲ မိန်းမ နဲ့ ကွဲနေတာ ကြာပြီးလေ မီလုံး ဘာလုပ်ရမလဲ တွေးနေတာပေါ့ တွေးနေတုန်းမှာ မီလုံး အနားရောက်လာပြီး မီလုံး နင်က ယောကျာ်း နှစ်ယောက်ရထားတာဆို ဟုတ်တယ် ” သူဌေး အော် ” ပထမ တစ်ယောက်က ဘာလို့လဲ အင်း “ပြောဆို အချစ်ဦးပေါ့ အလုပ်ကတော့ မယ်မယ်ရရ အလုပ်မလုပ်ဘူး စိတ်ကုန်ပေမဲ့ အကွာ ရက်နိုင်ဘူးလေ အော်” ဒီ တစ်ယောက် ကြတော့ရော အင်း ” ကိုအောင်ကျော်က ရိုးသားတယ်
အလုပ်လုပ်တယ်မီလုံး တစ်ခုလတ် ဖြစ်နေတာတောင် မီလုံးပေါ် အလိုက်သိတယ် လေ တခါတလေ မီလုံးကတောင် အားနာနေရတာဟုတ်ပါပြီး ” မီလုံးလဲ ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်း စကားလာပြောပါ ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိတာပေါ့ ဟုတ်ခဲ့ သူဌေး ဟာ သူဌေးလို့ မခေါ်ပါနဲ့ အကိုကြီးဆို တော်ပြီးပေါ့ မလုပ်ပါနဲ့ သူဌေးရယ် ဘေးလူ မြင်ရင် မကောင်းဘူး ဒါဆိုလဲ ဆရာလို့ဘဲ ခေါ်ပါ ဟုတ်ခဲ့ ဆရာ “” ဆိုပြီး လှည့်ထွက်သွားတယ်နောက်နေ့ မနက်ရောက်တော့ ထမင်းချက်နေရာလာပြီး မီလုံးကို စကားပြောတယ် မီလုံးလဲ ကလေးနို့ဘဲ တိုက်တာ ကြာတော့ “” ဟဲ့ မီလုံး ကလေးလဲ ငါနဲ့ တွေ့မှ နို့ဘဲ ဆာနေတာလား အင်း “” ဟုတ်မှာပေါ့ ကလေး လဲ ဆာသလို ဆရာလဲ ဘာလဲ နို့ဆာ နေလို့လား စ နောက် စကားသွယ်လိုက်တယ်နင်က တကယ် နို့တိုက်မှာလား ငါလဲနို့ဆာ နေတာ ကြာပြီးဟ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဆရာလည်း မီလုံး ရေချိူးနေတာ ကြည့်ကြည့်နေရတာဆရာ မီလုံးကို တစ်ကြိမ် တခါလောက် လုပ်ခွင့် ရရင် သိမ့်ကောင်းမှာဘဲလို့ တွေးနေမိတယ်
မီလုံးကတော့ ဆရာကို တခါလောက် လုပ်ခွင့်ပေးမလား ဟို အတူနေတာတော့ ဟုတ်ပါဘီ အင်းထဲက လူက မပြက်ဘူး ပြီးတော့ ယောက်ျား သား တွေနဲ့ဆိုတော့ ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး ဟယ့်တွက်နဲ့ ဘာမှ မပူနဲ့ ဆရာ မနက်ဖြန် မီလုံး တဲဘက် လာခဲ့မယ် ဘယ်သူမှ မရှိစေရဘူး အပျော် တွေနဲ့ ထွက်သွားတဲ့ ဆရာ ကျောကြည့်ပြီး မီလုံးလဲ သနားမိတယ်နောက်နေ့ မနက်ရောက်တော့ အင်းသားတွေကို ဆရာက အကုန်ခေါ်တယ် ပြီးတော့ အနောက်ဘက် ဝေးတဲ့ အင်းတစ်အင်းဘက် သွားခိုင်းပြီး ဆယ်တွေ ယူခိုင်းတယ် ယောကျာ်းအကုန်နီးနီး လိုက်သွားဆိုဘဲ ၉နာရီလောက် မီလုံးလဲ ရေချိူးထားလိုက်တယ် ပြီးတော့ ဆရာက မှန်ဘလူး နဲ့ ကြည့်နေတယ်ရေချိူးပြီး တဲထဲ သနက်ခါးလိမ်နေလိုက်တယ်အကျီင်္ ဝတ်မယ် ရှိသေး ဝတ်မနေပါနဲ့ မီလုံးရယ် ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပါဘူး ဟင်””ဆရာက မြန်တာ ရောက်လာတာ ဟဲဟဲ မမြန်ဘဲ ရမလား ညနေဆို အကုန်ပြန်လာတော့မှာ မလာခင် အ ဝ စားချင်လို့ပေါ့ ဟွန်း သိပါတယ်
ဒါကြောင့် လူရှိသမျှ အကုန် ထည့်လိုက်တာ ဆရာ မီလုံးနား ရောက်လာပြီး လိမ်းထားတဲ့ သနက်ခါး ပါးပြင်ကို စ နမ်းတယ် ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ် လဲပြီး ထမိန်းလေးကို အသာလေး ချွတ်ပြီး မီလုံး စပ )လေးကို ပွတ်ပေးနေတယ် ခနလောက်နေတော့ ဆရာ လဲ ပုဆိုးချွတ်တယ် ဟင် ” ဆရာဟာက အကြီးကြီးဘဲ မီလုံး ခံနိုင်ပမလား အဲ့မယ် ယောက်ျား နှစ်ယောက် လီးတွေ့ပြီးခုဟာက ကြီးတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်လေ နှစ်ယောက်လုံးက ဆရာ ဟာလောက်အကြီးဘူး သေချာတယ်နေပါဦး ပထမ တစ်ယောက်တုန်းက အလုပ်ဇွဲ မရှိပေမဲ့ လုပ်တာ အရမ်းကောင်းလို့ မကွာနိုင်တာ မို့လား ဆရာက သိနေတာဘဲ ဟုတ်တယ် အလုပ်ဇွဲ မရှိပေမဲ့ မီလုးံ လုပ်တာပေါ့ နည်းပေါင်းစုံဘဲ ဒါကြောင့်လည်းမီလုံးက ၃လ ၄လ လောက် မကွာနိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါပြီး ခု ဆရာနဲ့ တွေ့ ရင် မီလုံးသဘောကြသွားမယ် ပြောပြောဆိုဆို မီလုံး နို့တွေကို ကိုင်ပေးနေတယ် ပြီးတော့ ပိပိ လေးကို လက်ကလေးနဲု့ ကလိပေးနေတာ နောက်ဆုံး ပိပိ လေးကို ဆရာ လီးကြီးက လာပြီး ကလိပေးနေတယ်
မီလုံးလဲ ကြာလာလေ မနေနိုင်ဘူးအရမ်း ရမ္မက် စိတ်တွေက ထ လာတယ်ဆရာရယ် ထည့်မှာဖြစ် ထည့်ပါတော့ မီလုံး မနေနိုင်တော့ဘူး အရမ်း ယားပြီး ဘလို ပြောရမလဲ မသိတော့ဘူးပြောပြောဆိုဆို ဆရာ စ ထည့်တယ်လာတယ်အာ” အား “””””” ကျွတ် ” ကျွတ် နာတယ် ဆရာ ဆရာဟာက အတော်ကြီးတာဘဲ အင်းလေ ကြီးမှာပေါ့ ဆေးထိုးထားတာလေ မြို့မှာ လီကြီးမှ မိန်းမတွေက ကြိုက်ကြတာ မလေးးမီလုံး လဲ ကြိုက်ပါတယ် မြို့ထင်မဟုတ်ပါဘူး မိန်းမတိုင်း လီးကြီးတာ ကြိုက်ကြတာပါ ဆရာ ဖြေးဖြေး “” အား “””အာ အရမ်း ကောင်းလားပြီး ဆရာ အင်း ဆရာလဲ မိန်းမ နဲ့ ဝေးနေတာ ၅ရက်ရှိပြီး မီလုံးကိုဘဲ ကျေးဇူး တင်ရတော့မယ် လုပ်ပြီး မီလုံးရေး ဆရာလဲ မနေနိုင်တော့ဘူး ဘွတ်”ဘွတ်” အား ” အာ ကောင်းတယ်ဆရာ ဒီထက် မြန်လေ ကောင်းလေ ဘဲ အရမ်းထိတယ်အား”” ဘွတ် အား””””” ကောင်း ” ကောင်းတယ် ” ဆရာ မြန်မြန်”” လေ “လုပ်ပေးပါ ” အား ” အာ “” ပြီးပြီး” ပြီး တေည့မယ် ” အား ” အာ “အား ” အာ””” ဆရာလဲ အမြန်လုပ်ပြီး ပြီးသွားတယ် မီလုံးလဲ ပြီးသွားတယ် ခနလောက် နားပြီး ဆရာ မီလုံး ထမင်ချက်လိုက်ဦးမယ် ဆရာ ခန ဒီမှာ မှေးနေလေ ဆိုပြီး ဆရာ တဲဘက် ထမင်းချက် ထွက်သွားခဲ့တယ် တအောင်လောက် ကြာတော့ ဆရာက ပေါ်မလာဘူး ဒါနဲ့ လိုက်ခေါ် ကြည့်တော့ အိပ်နေတယ် ဆရာ ” ဆရာ ထတော့လေ ဆရာ ဆရာ ထလာပြီး မီလုံးမြင်တော့ ကုတင်ပေါ် ဆွဲလှဲလိုက်တယ် ပြီးတော့ ထမိန်းကို ဆွဲချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ် လေးဘက် ထောက်ခိုင်းတယ် ပြီးတော့ နောက်ကနေ စ ထည့်တော့တယ်
ဆရာကြည့်ရတာ အတော် ငတ်နေပုံဘဲ မီလုံးကို နောက်က မီးကုန်ရမ်းကုန် ဆော်နေတော့တယ်ခနလောက်ကြာတော့ အား ဆိုပြီး ပြီးသွားပုံဘဲ ဆရာ ထမင်းခူးထားလိုက်မယ် ခနနေ ဆရာ တဲဘက် လာခဲ့တော့ ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ် ဆရာ ရောက်လာတော့ ထမင်းခူး ထားလိုက်တယ် ဆရာလဲ မထင်းစားပြီး မီလုံး တခါထဲ ဝင်စားပါလား တော်ပါပြီး ဆရာ ဆရာစားပြီးမှဘဲ စားပါတော့မယ် အေးအေး သဘောပါဘဲ ဆရာစားပြီးတော့ မီးလုံးလဲ ထမင်းစားတော့တယ်စားပြီးလို့ စကားပြောကြတာပေါ့ဆရာက ဘယ်တော့ ပြန်မလဲ ဟင်”အင်း ဒီကို တစ်ပတ်ဘဲ အချိန်ရမှာလေမြို့မှာလဲ အလုပ်ရှိသေးတယ် တစ်ဘက်ခါ ဆိုပြန်မှာ အော် မပူပါနဲ့ နောက်လ တွေ ဆရာ လာရင် ဒီလိုဘဲ ကျွေးပါ မီလုံး စပ အရမ်းလုပ်ကောင်းတာ် အို ” ဆရာကလဲကြာပါတယ် ခနနေ ဟိုကောင်တွေ လာတော့မှာ မီလုံး တချီလောက် ဆွဲရအောင် ဒါဆို ဆရာ ခန လှဲနေလိုက် မီလုံး ပြုစု ပေးမယ် ဆရာလဲ ကုတင်ပေါ် လှဲနေလိုက်တယ်မီလုံးလဲ ဆရာ ပုဆိုး ကို အသာလေး မ လိုက်တယ်
အမ် ” ဆရာဟာကလဲ လွန်းလွန်းတယ် မာ မာနိုင်တယ် မာမှာပေါ့ မီလုံးရယ် ၅ရက်လောက်က ငတ်နေတော့ ပြီးတော့ မီလုံးကို လိုးခွင့် ရချင်နေတော့ ထ လာတာပေါ့ မီလုံးလဲ ဆရာ လီးကို အသာ လေး ငုံလိုက်တယ် ပြီးတော့ လျှာဖျာ လေးနဲ့ လီးထိပ်ကလေးကို ကလိပြီး ရက်ပေးနေတယ် ပြီး ရေခဲချောင်း စုတ်သလို စုတ်ပေးပြီး အာခေါင်ထိ ငုံပေးလိုက်တယ် ဆရာ အသံတွေ တအာ” အား နဲ့ ထွက်လာတယ် ကောင်းလှကြီးလား မီလုံးရယ် အိမ်က မိန်းမ ဘယ်နား ထားရမလဲ မသိတော့ပါဘူး မီလုံး လဲ ဆရာကို သနားလို့ပါ သူများ ရေချိူးနေတာကိုချောင်းချောင်းကြည့်နေတာ မသိရင် ခက်မယ် အင်းပါကွယ် ဆရာလဲ မီလုံးကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ် မူတ်ပေးပြီး မကြာပါ ဆရာ ထ လာပြီး မီလုံးကို လုပ်တော့တာဘဲ ဒီတခါ အရင် တခါလောက် မမြန်ဘဲ ကြာကြာလေး လုပ်ပေးသွားပြီး ပြီးသွားတယ်
ညနေ ရောက်တော့ ယောကျာ်း နဲ့ အင်းသားများ ပြန်ရောက်လာပြီး ညကြ ယောကျာ်းက တတ်လိုးပြန်တယ် ည ဆရာတဲဘက် တီဗီ မကြည့်နိုင်ဘဲ မောပန်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ် မနက် ထမင်းချက်သွားတော့ ဆရာက မီလုံး ညက ဘာလို့ မလာတာလဲအင်း မီလုံးလဲ ပင်ပန်လို့ အိပ်ပျော်သွားတယ် လေ အော် ဘာလဲ ယောကျာ်းက တတ်လိုးလို့ မောသွားတာလား ဟိ အင်းပေါ့ နေ့ ခံ ည ခံ ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ အင်းပါလေ ဒီညတော့ တံဘက် တီဗီ လာကြည့်ဦး ဆရာက မနက်ဆို ပြန်မှာ ဟုတ်ခဲ့ လာမှာပါ ပြောပြီး ဆရာလဲ ထွက်သွားတယ် နေ့လည် လောက်ရောက်တော့ တဲဘက်ပြန်ပြီး တရေးတမော အိပ်နေလိုက်တယ် အသံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ဟင် ” ဆရာ ဘာလာလုပ်တာလဲရူးတိုးတိုး မင်းယောကျာ်း ခု ခိုင်းလိုက်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ အပြင်သွားတယ်
ငါမနေနိင်လို့ အော် ဆရာရယ် မြန်မြန်လေးတော့ လုပ်ပါနော် ကလေးလဲ နိုးနေအုန်းမယ်အေးပါ မီလုံးရယ် ဟင် နင်ဟာက အရည်တွေ ထွက်နေတာပါလား မဟုတ်ဘူး ဆရာရဲ့ ကိုအောင်ကျော် ခုလေးတင် တတ်လုပ်သွားတာ မီလုံး ရေဆေးဦးမယ် ခန နေနေ အချိန် မရဘူး သူများ လုပ်ပြီးသား ထပ် လိုးရမှာ ဒါ ငါ့ဘဝ ရဲ့ ပထမ ဦးဆုံးဘဲ ဆိုပြီး ချွဲနေတဲ့ စက်ပက် ထဲကို လီးထည့်ပြီး ဘွတ် ” ဖွတ် ” အွန့် ” အားပါးပါး ကောင်းတယ် ဟ စီးဖန်နေတာဘဲ အရမ်း အရသာ သမျိူးပေါ့ မြန်မြန် လုပ်ပါ ဆရာ ဆရာလဲ အချိန်မရမှန်း သိတော့ မြန်မြန်လေး ပြီးသွားတယ် ညရောက်တော့ ဆရာ ပြောသလိုဘဲ ကလေးကောက်ချီပြီး တီဗီ လာကြည့်တယ် တီဗီ တာကြည့်နေရတာ ဒီနေ့က ဘောလုံးပွဲကြီး လာနေတော့ ကြည့်ရတာ ပြင်းမိတယ်
ဒါနဲ့ ဆရာ ကြည့်တော့ မျက်စ ပြစ်ပြတယ်အပြင် ထွက်ခဲ့ သဘော ပေါ့ ဒါနဲ့ ယောကျာ်း နေခဲ့ မလား မီလုံး ပြန်တော့မယ် အေးအေး မိန်းမပြန်နှင့်တော့ ဘောပွဲပြီးမှပြန်လာတော့မယ် အင်း ဒါဆို သွားပြီးနော် ဆိုပြီး ကလေးချီ ထွက်ခဲ့တယ် လမ်း ဝါးရုံနား ရောက်တော့ ဆရာ လိုက်လာမလား ဆိုပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်ခနနေတော့ ဖနပ်သံ ကြားရပြီး ဆရာ ရောက်လာတယ် နင်စောင့်ပါ့မလား တွေးပူနေတာ ငါလဲ ဒီကောင်တွေ ဘောပွဲ ကောင်းနေတုန်း အိပ်သာဆိုပြီး ထွက်လာတာ ဟို နင်ကလေး ခန ချထားလိုက်ပါဟာမီလုံးလဲ ကလေးကို အောက် ခန ချပြီး ကြာတယ် ဒီတိုင်း လုပ်တော့မယ်ဟိုဘက်လှည့် ဝါးရုံပင် ကိုင်ပြီး ဖင်ကုန်ပေး ငါနောက်က လိုးမယ်ဆိုပြီး မီလုံး နောက်ကနေ မြန်မြန် သွက်သွက်ေီလုးနေတယ် တအောင့်နေတော့ ဆရာလဲ ပြီးသွားတယ် နောက်လ တွေ ဆရာ လာရင် လာသလို ခိုးစားခဲ့တယ်ဒီနေ့ ဒီချိန်ထိ ဆိုပါတေ…. ပြီး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged တျောပါတော့ ဆရာ